Lehilahy Palestiniana Iray Manira-Tena Hampanao ny Fambolena An-tanandehibe ho Azo Iainana Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, македонски, Français, Español, русский, Esperanto , Português, नेपाली, عربي, English
Navoaka voalohany tao amin'ny Ensia.com ity lahatsoratra avy amin'i Todd Reubold ity, tranonkala gazetiboky iray izay manasongadina ny vahaolana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny asa mivaingana, ary navoaka eto indray izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Manerana izao tontolo izao, manana anjara eo amin'ny fanomezan-tsakafo ny mponina mitombo manerantany avy any Amerika Avaratra ka hatrany Afovoany Atsinanana ny fambolena an-tanàndehibe.
Ny lahatsary etsy ambony dia manao fampidirana an'i Said Salim Abu Naser, mpanohana ny fambolena maharitra izay mipetraka sy miasa ao an-tanàndehiben'i Gaza, Palestina, manamorona ny Morontsirak'i Mediteranea.
Nanangana toeram-pambolena organika mirefy 200 metatra toradroa i Abu Nasser amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rafitra fambolena anaty rano sy ny vahaolana organika namboarina hiadiana amin'ny bibikely izay ahitana tongolo gasy, dipoavatra, savony sy ny zavatra maro hafa ihany koa.
Mamokatra sakafo milanja 3500 kilao izy isan-taona izay ampy tsara hanohanana ara-tsakafo ny olona miisa 30. Fa ny tena zava-dehibe kokoa dia afaka atao maodely ho an'ny hafa izay mikasa hamboly sakafo kely kokoa kanefa maharitra ny toeram-pamboleny ao an-drenivohitra.
Ity lahatsary ity dia novokarina, nalaina ary navoakan'i Yasser Abu Wazna tao amin'ny Ensia, mpamokatra sarimihetsika mahaleotena iray monina any amin'ny faritany Palestiniana .
15 ora izayAzia Atsinanana